Videos – Orio Economics
November 14, 2020 Videos
Ponzi Scheme ဆိုတာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို လိမ်လည်တဲ့နည်းတခုပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကို မက်လောက်စရာ အကျိုးအမြတ်တွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ပြီး လိမ်လည်တဲ့နည်းကို မြန်မာပြည်မှာသာမက တကမ္ဘာလုံးမှာ အသုံးချနေဆဲပါပဲ။ Ponzi Scheme ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ? လူတွေကဘာကြောင့် လိမ်လည်ခံနေရသလဲ ? အလိမ်မခံရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ Orio Econ ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
September 30, 2020 Videos
Recession ဆိုတာဘာလဲ ?
Recession ဆိုတာ “စီးပွားရေးကျဆင်းမှု” လို့အကြမ်းဖျင်းသိကြပေမဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေရောက်မှ Recession လို့သတ်မှတ်တာလဲ။ Recession တိုင်း အခြေအနေတူကြသလား ? နိုင်ငံက Recession ထဲဝင်သွားပြီဆိုရင် အစိုးရက ဘယ်လိုပံ့ပိုးမှုတွေပြုလုပ်ပေးသလဲဆိုတာ အလွယ်ကူဆုံးရှင်းပြပေးထားပါတယ်။
Paradox of value – ကုန်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုးဝိရောဓိ
စိန် နဲ့ ရေသန့်တစ်ဗူးရဲ့ ဈေးနှုန်းက မိုးနဲ့မြေလို ကွာခြားပါလျက် ကြိုက်တာရွေးချယ်ပါဆိုရင် လူတိုင်းက စိန်ကိုမရွေးရတဲ့ အချို့အခြေအနေတွေရှိတယ်။ စိန်ကိုမယူပဲ ရေဗူးပဲယူမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချအောင် ဘယ်အရာတွေက တွန်းအားပေးနေသလဲ? Adam Smith ပြောခဲ့တဲ့ Exchange value နဲ့ Use Value တို့ရဲ့အကြောင်းတို့ကို ယခု…
September 7, 2020 Videos
Inflation-ငွေကြေးဖောင်းပွခြင်း (Explained animation video)
ငွေကြေးဖောင်းပွခြင်း။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေတာလဲ ငွေကြေးဖောင်းပွဖို့ လိုအပ်သလား၊ ဘာ့ကြောင့်လိုအပ်သလဲ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့် အကျိုးဆက်ဘာတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ ကူးယူဖော်ပြခြင်းခွင့်မပြုပါ။ Developed by Orio Economics Team
September 6, 2020 Videos
GDP ဆိုတာဘာလဲ? (Explained animation video)
GDP ဆိုတာဘာလဲ? ဘာကြောင့် GDP အကြောင်း သိသင့်တာလဲ ? GDP ကနေ ဘာတွေသိနိုင်သလဲ ? GDP ရဲ့အားနည်းချက်က ဘာလဲ? ကူးယူဖော်ပြခြင်းခွင့်မပြုပါ။ Developed by Orio Economics Team
February 11, 2020 Videos
Consumer Behavior and Consumer Buying Process
စားသုံးသူ consumers များ ကုန်ပစ္စည်းတခု ဝယ်ယူတဲ့အခါ ဘယ်လို stage တွေဖြတ်သန်းသလဲ၊ မဝယ်ခင် ဘယ်လို decision ချသလဲ၊ ဝယ်ယူပြီးနောက် ဘယ်လို ပြုမူလေ့ရှိကြသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Inflation – ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအကြောင်း
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ဖြစ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများ၏ inflation rate များအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြချက် Basic concepts on Inflation
Franchise လုပ်ငန်းများ၏ မိခင် မာသာဟာပါ
အမျိုးသမီး စွန့်ဦးတီထွင်သူ မာသာဟာပါ (သို့မဟုတ်) Franchise လုပ်ငန်းဖြင့် အမေရိက တလွှား ပိတုန်းရောင်ကေသာဖြန့်ခဲ့သူ Martha Matilda Harper Pioneer Of Franchise Business Model